how to upgrade zawgyi font from online – box02's little blog
box02's little blog
August 26, 2009 by box02
how to upgrade zawgyi font from online
မနေ့ညကထုတ်လိုက်တဲ့ zawgyi-keybaord-0.3.1 release မှာ Zawgyi-One_2009_August_25_v4.19.ttf နဲ့အတူ ပူးတွဲပြီးထွက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ည ကိုစိုးမင်းက Zawgyi-One_v4.20_August_26_2009.ttf ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကံကောင်းစွာ ဒီ howto ကို အားခြင်းဖော်ပြခွင့်ရပါတယ်။ ဖွန့်အသစ် upgrade လုပ်သူများအနေနဲ့ မိမိ၏စက်မှာ online ဖြစ်မနေပါကလဲ ယခင်ပြခဲ့တဲ့နည်းအတိုင်း `man upgrade` function နဲ့ downloaded font ရဲ့ local saved directory ကို Enter လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် upgrade လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ခုအောက်မှာ screenshots လေးတွေနဲ့ online upgrade function နဲ့ ဘယ်လို font upgrade လုပ်သလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အတိုင်း ပထမဦးစွာ zawgyi-keybaord-0.3.1.tar.gz ကို extract လုပ်မယ်၊ `zawgyi` ဖိုဒါထဲဝင်မယ်။ ပြီးရင် `zawgyi_keyboard.py` script ကို python နဲ့ run ပေးပြီး program ကိုစရအောင်၊ sudo ဒါမှမဟုတ် su ခံသုံးပေးဖို့လဲ လိုပါမယ်။ ကျနော် ခု နမူနာပြတာက downloaded package က desktop ပော်မှာထားတာပို့ Desktop ထဲဝင်ပြီး စပါမယ်။
$ tar zawgyi-keyboard*.tar.gz
$ cd zawgyi
$ sudo python zawgyi_keyboard.py
extract package & start running zawgyi_kyeboard.py
ဒီနေရာမှာ ကျနော် `i` ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး package ကို install လုပ်ပါမယ်၊ လုပ်ရတဲ့အကြောင်းက package ထဲကဖွန့်က v4.19 ရှိသေးတာကို မြင်စေချင်တာရယ်၊ နောက်ပြီး ဒီ zawgyi-keyboard-0.3.1 မှာ kokhy fixed လုပ်ထားပေးတဲ့ mm file အသစ်ပါတာရယ်ကြောင့် install လုပ်ပါတယ်။
press `i` to install package
Installation ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျနော် `s` ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး show_font function ကို run ပါတယ်၊ ဒီ function က စက်ထဲ installed လုပ်ထားတဲ့ ဇော်ဂျီဖွန့်နဲ့ ခုလက်ရှိနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ ဇော်ဂျီဖွန့်ကို ယှဉ်တွဲဖော်ပြပေးမှာပါ။ အောက်ကပုံမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျနော့်စက်ထဲက ဇော်ဂျီဖွန့်က `Zawgyi-One_2009_August_25_v4.19.ttf` ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ online မှာနောက်ဆုံး ထွက်နေတာက `Zawgyi-One_v4.20_August_26_2009.ttf` ဆိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ ပုံထဲမှာ Current installed font ဆိုတာက ကိုယ့်စက်ထဲမှာ သွင်းထားတဲ့ဖွန့်ကိုပြောတာဖြစ်ပြီး Online available latest font ဆိုတာက ကိုယ့်မှာမရှိသေးပဲ အင်တာနက်ပော်မှာ ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
press `s` to show & compare fonts
ကိုယ့်စက်က Internet connection ရှိနေတယ်ဆိုပါက `o` ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး တခါတည်း download ပြီးတော့ upgrade လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပါ။
press `o` to upgrade font from Internet
ပြီးတဲ့အခါ show_font function နဲ့ တခါပြန်ပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စက်မှာ တကယ်ပဲ upgrade ဖြစ်သွားလား ဒါမှမဟုတ် နောက်ထပ် latest available font ထွက်ကို စမ်းစစ်နိုင်ပါတယ်။
press `s` to check fonts & `q` to exit program
Have fun with your zawgyi-keyboard package! 🙂
This entry was posted in Linux, Software, Unix, Zawgyi and tagged FreeBSD, Howto, Linux, Package, Python, Script, Zawgyi. Bookmark the permalink.
← zawgyi-keyboard-0.3.1 release out
zawgyi-keyboard-0.3.2 release out →
If you want zawgyi or mm3 font and xkeyboard for Linux and FreeBSD, download from
Github Repositories for mm3-keyboard, zawgyi-keyboard and Burma-keyboard-Tk
Testing Burma-keyboard-Tk on FreeBSD
future gui of install scripter for mm3 and zawgyi keyboard [draft2]
future gui of install scripter for mm3 and zawgyi keyboard [draft]
Howto | Tips